LT-1000 Yekutakura Wiricheya ine loop mabhureki - Karman Healthcare
×	 LT-980 - 13 lbs *	1 × $473.00
musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya / Kutakura Mawiricheya
View ngoro "LT-980 - 13 lbs *" yakawedzerwa kungoro yako.
LT-1000 - 23 lbs
Aluminium LT-1000 Yekutakura Wiricheya
Kune vashandisi, uye vanochengeta vanotsvaga wiricheya yekufambisa iyo inogona kushandiswa mukati meimba, uye kunze, iyo LT-1000HB nhevedzano inogona kugadzirisa zvaunoda.
Kune bhajeti inoshamwaridza shopper, iyo LT-1000 Yekutakura Wiricheya akateedzana akagadzirirwa chaizvo kuendesa chaizvo izvo zvinodiwa nevazhinji vashandisi nevatarisiri zvakafanana.
Kutanga newaakabatana naye mabhureki emaoko, ayo anotendera vachengeti kuti vagare zvakanaka uye zvakanaka vaunze wiricheya panzvimbo inomira zvakanaka, pamwe nekupaza bhureki rekupaka kuti ubatsire mukufambisa kwakachengeteka. Izvi zvinouya ne aruminiyamu furemu, chinova chinhu chakanyanya kunaka.
* Yekukurumidza ngarava Checkout, edu akajairika base mamodheru anozotumirwa mu19 ″ chigaro upamhi. Iwe unogona zvakare kugadzirisa pane inodonhedza menyu pazasi.
hapana 19 ″ x16 ″
hapana Kufamba Kure - Yakajairwa Kukwidza (+ $ 60.00)
hapana Burgundy Bhuruu
hapana 18 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 219.00)	20 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 229.00)	18 ″ x17 ″ Chigaro cheFoam Cushion (+ $ 72.00)	20 ″ x17 ″ Chigaro cheFoam Cushion (+ $ 82.00)	18 ″ x17 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 98.00)	20 ″ x17 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 108.00)
hapana 18 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Kudzoka Kusheni (+ $ 189.00)	20 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Kudzoka Kusheni (+ $ 199.00)	18 "Wide Chigaro Furo Kudzoka Cushion (+ $ 98.00)	20 "Wide Chigaro Furo Kudzoka Cushion (+ $ 98.00)
16 ″ -18 "Width Yakapetwa Musoro Headrest (+$154.00)
LT-1000 - 23 lbs huwandu
SKU: LT-1000 Categories: Wiricheya isingaremi, Chinyorwa Wiricheya, Mawiricheya akajairwa, Kutakura Mawiricheya Tags: aruminiyamu, aruminiyamu yekufambisa wiricheya, wheelchair isina mwero, chokufambisa wiricheya, wiricheya, mavhiripu
Mavhiri makuru e12-kumashure ekufambisa akasimba, poly urethane kubatsira mukutaurirana zviri mukati, nenzvimbo dzekunze. Zvakare zvinosanganisirwa ndezve kubviswa kusvetuka kure netsoka ine tsoka dzechitsitsinho kudzivirira tsoka kutsvedza. Zvese izvi zvakajairwa maficha, uye zvimwe zvinoita iyo LT-1000HB nhevedzano yakakwana kutengeserana kune wepakati mushandisi ari kutsvaga wakakura, wakaderera mutengo. transport chair, yekushandisa pfupi kana kwenguva refu.
Yakasimba & isingaremi aluminium furemu
Yakapetwa yakagadziriswa yakazara yakazara armrests
Kupeta backrest kuitira nyore kuchengetedza
18 "chigaro chine kutakura zvishwe zvekutakura zviri nyore
Chigaro chebhandi chinouya zvakajairwa w / kutakura
Swing-kure tsoka dzekutsika w / chitsitsinho chiuno
8 "pamberi caster, 12 ½" kumashure yakasimba solid polyurethane tai
Ruoko chiuno mabhureki system yemushandi
Yakakwira-giredhi murazvo unodzora, unofema nylon upholstery
Chimiro Ruvara: Bhuruu kana Burgundy
HCPCS Kodhi E1038*
Chigaro Kudzika 16 padiki.
Kunopindirana Kureba 40 padiki.
Pakazara Hupamhi Hupamhi 21 1/2 padiki.
Kurema Pasina Riggings 23 makirogiramu.
Kutumira Kukura 28, L x 31, H x 11, W
Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuvandudza kunogara kuripo, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzakapihwa dzinoenderana neese magadzirirwo eiyo wiricheya
LT-1000 Kutakura Wiricheya UPC #
Zvamunoda LT-1000HB-BL 661799290241
T-920 & T-922 - 40 makirogiramu
28 × 11 × 31 mukati
Nyeredzi 2 - 28 lbs